Kamerona: Enoh Meyomesse, Bilaogera Mbola Any Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Mey 2013 9:05 GMT
Mpanoratra Kamerone sady mpibilaogy atao hoe Enoh Meyomesse no voafonja any Yaoundé, renivohitr'i Kamerona, nandritra ny 17 volana mahery. Voahendrikendrika ho nangalatra sy nivarotra volamena tsy ara-dalàna izy, nohelohin'ny tribonaly miaramilan'i Yaoundé higadra nandritra ny fito taona an-tranomaizina izy, taorian'ny dingana maro izay heverin'ireo fikambanana maro ho tsy ara-drariny. Maro no miahiahy fa Meyomesse, izay nahazo ny Oxfam Novib/PEN Award tamin'ny 2013 ary ankehitriny mpikambana am-boninahitra ao amin'ny Foibe Amerikana PEN , dia miatrika fitsarana ara-politika izay mikasa hanakombonana vava ny iray amin'ireo olona manampahaizana izay tena miroborobo fatratra any Kamerona.
Afaho i Enoh avy amin'ny Foibe Amerikanina PEN (CC BY-NC 3.0 Unported)
Tranga maro no mampiseho ny fikorontanan-tsaina misy eo amin'ny fitondrana mikasika ny raharaha Enoh Meyomesse. Ny 22 febroary 2013, ny Komity hoan'ny Fanafahana an'i Enoh dia noeritreretina handray anjara taminà famelabelaran-kevitra ho an'ny mpanao gazety, nokarakarain'ny Tribunal Article 53, Fikambanana Kamerone tsy miankina, mikasika ny fiainan'ilay mpibilaogy sady mpanoratra. Saingy voarara avy any ifotony ilay famelabelaran-kevitra [fr] vokatry ny hoe tsy ampy ny fangatahan-dàlana natao tany amin'ny tompon'andraikitry ny fivondronana. Tamin'io horonantsary io, izay nalaina ny 22 Febroary, nolavin'ireo mpikarakara ilay fanakanana raha ireo mpitandro filaminana indray nandidy ny hivoahan'ireo mpandray anjara tao anaty trano. PEN dia namorona fitanisàna azo tetezina mikasika ny fanagadràna an'i Enoh Meyomesse.
Etsy andaniny, nanomboka ny 5 aprily 2013, Enoh dia voarara [fr] n'ny mpiandraikitra tsy hampiasa ny efitrano misy ny infôrmatika ao amin'ny fonjan'i Kondengui, toerana itazonana azy. Enoh dia nampiasa ireo solosaina mba hanoratana boky telo: Tononkalom-panantenana, Ny vato nasondrotry ny tany manohitra ny vahoaka hatramin'ny 1884 ka hatramin'izao, ary ny Kamerona: Tany Hain'ny Zon'olombelona. Tao anaty taratasy iray nalefa ho an'ny mpiandraikitra ny fonja, Enoh Meyomesse dia maneho ny hagagàny mikasika ny fomba fitondràna azy ao Kondengui.
Manoloana io tontolo tsy araka ny maha-olombelona io, mitohy ny fihetsiketsehana ho amin'ny fanafahana an'i Enoh Meyomesse. Miaraka amin'ny fanampiana mifanaraka tsara omen'ireo mpisolovavany, voaray ny antson'i Enoh manohitra ny fiampangàna azy ary hoesorina amin'ny fitsarana miaramila ary hoentina any amin'ny fitsarana olon-tsotra ny raharahany.
Nanomboka naneho ny fiarovany an'i Meyomesse ireo mpisolovava rehetra maneran-tany. Ny fikambanana miorina ao Parisy dia namorona ary nihira ity hira ity, mifototra amin'ny tononkalo Noël en Prison (Noely any amponja) nosoratan'i Enoh Meyomesse.
Hanana ny Topimasony Erantany mivoaka aminà fotoana voatondro, na Universal Periodic Review (UPR) avy amin'ny Filankevitry ny Firenena Mikambana Misahana ny Zon'Olombelona i Kamerona ny 1 mai 2013. Fikambanana maro iraisampirenena no nitaky tamin'ilay firenena ny fampitsaharana ny famoretana atao ny mpanoratra sy ho fiarovana ny fahalalahan'ny maneho hevitra ao amin'ny aterineto.
Ho famoahana an'i Enoh Meyomesse dia nanagon-tsonia ireo mpisolovava. Mba handraisana anjara amin'ny fiaraha-mientana, vakio, soniavo ary zarao ny fanangonan-tsonia amin'ny fikitihana eto.
13 Aogositra 2021Afrika Mainty